June 2015 | OKKALA STORE
Posted by okkala net at 6:12 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 6:09 AM 1 comment: Links to this post
ကိုရီးယားကျောင်းသား ဟာသကားပါ။ Adult Movie ဖြစ်ပါတယ်။
Download and Watch 480p(pCloud Link)
Download and Watch 360p Small File Size(350MB)
ဒီကားက ၁၉၇၉ တုန်းက ထွက်ခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီး Mel Gibson ရဲ့ Mad Max ဇာတ်လမ်းတွဲကို ဇာတ်လမ်းကျောရိုးယူပြီး ပြန်လည် ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားက Rated-R ဖြစ်ပြီး ကလေးတွေကြည့်ဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။ ဇာတ်ကားမှာ မင်းသား Tom Hardy က Max အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး၊ Charlize Theron နဲ့ Nicholas Hoult က တွဲဖက် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းက ကမ္ဘာပျက်ပြီးနောက် Australia ကို ဇာတ်အိမ်တည်ပြီးရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး၊ ဒီဇာတ်လမ်းထဲက Australia မှာ လူတိုင်းက ဓါတ်ဆီကို လုနေကြပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားက သာမန် Remade ဇာတ်ကားတွေလို Original Mad Max ကို အသစ်အနေနဲ့ ပြန်ရိုက်ထားတာ ဇာတ်လမ်းကျောရိုးကိုပဲယူပြီး ဇာတ်အိမ်အသစ်နဲ့ ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီကားမှာ Superhero ကားတွေလို Robocop (2014) လို ဇာတ်လမ်းကမင်းသားရဲ့ Origin (သူရဲ့နောက်ကြောင်း) ကို အချိန်ကုန်ခံပြီး ပြမနေပါဘူး။ Max က ဘယ်လိုလူမျိုးလည်းဆိုတာ တခါတည်းတန်းပြပြီး ဇာတ်လမ်း ကို စတင်ထားပါတယ်။
ဒီကားမှာ မင်းသားရဲ့ နောက်ကြောင်းကို သာမက ဇာတ်ကောင်တွေတော်တော်များများရဲ့ နောက်ကြောင်း ကိုလည်း ဘာမှမပြနေပဲ နဲ့ ဇာတ်လမ်း ကိုအသားပေးတင်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဇာတ်ရှိန်ရလာတာနဲ့အမျှ အဓိကဇာတ်ကောင်တွေအကြောင်းကို တဖြည်းဖြည်းချင်း ပရိတ်သတ်ကို သိစေလာတဲ့ပုံစံ မျိုးနဲ့ ပညာသားပါပါတင်ဆက်ထားပါတယ်။
။ ဇာတ်လမ်းမှာ လူဆိုးခေါင်းဆောင် Immortan Joe က သောက်သုံးရေကို ထိမ်းချုပ်ထားပြီး လူတွေကို လည်း ခိုင်းစားထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိန်းမချော လေးတွေကိုလည်း ရွေးချယ်ပြီး ကလေးမွေးဖို့အတွက် သက်သက် ဖမ်းထားထား ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအစမှာ Max က Immortan ရဲ့ လူတွေဖမ်းတာခံရပြီး blood bag (သွေးသွင်းတဲ့ အိတ်လို့ တင်စားခေါ်တာဖြစ်ပြီး) Max ရဲ့ သွေးကို Nux လို့ခေါ်တဲ့ Immortan ရဲ့ စစ်သားကိုသွင်းပေးထားပါတယ်။
ဒီနောက်မှာ Furiosa လို့ခေါ်တဲ့ သူ့ရဲ့ ညာလက်ရုံး (Charlize Theron) ကို ရေနံထွက်တဲ့မြို့က နေ ဓါတ်ဆီကို သွားယူခိုင်း ပါတယ်။ ဒီလိုသွားယူရာမှာ Furiosa က War Rig (ရေနံနဲ့ ရိက္ခာသာမက လက်နှက်တွေပါပါပြီး၊ ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့) ကားကို မောင်းရပါတယ်။ ဒီကနေ သူမက ရေနံသွားမယူပဲ လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ Immortan Joe က သူရဲ့ မိန်းမ ငါးယောက် ရော သူ War Rig ပါ ပါသွားလို့ နောက်ကနေ လိုက် တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုလိုက်ရာမှာ Nux (Nicholas Hoult) က သွေးသွင်းရင်း နဲ့ လိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီး လိုက်ရာကနေ Max ပါပါသွားပြီး လမ်းမှာ Max နဲ့ Furiosa တို့ ပေါင်းမိသွားရာကနေ သူတို့ လိုရာကို အရောက်သွားကြသလို၊ နောက်က လိုက်တဲ့သူတွေကလည်း လိုက်ရင်းနဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံးက Car Chase Scene တွေနဲ့ပဲ ပြည့်နေပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းထဲမှာ Nicholas Hoult ရဲ့ ဇာတ်ကောင် Nux အပါအ၀င် Immortan ရဲ့ စစ်သားတွေကို War Boy လို့ခေါ်ပြီး သူတို့ ကို ဒီကောင်ကြီးက မဟုတ်တာတွေပြောဆိုပြီး ခိုင်းစားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ သေဖို့တောင် မကြောက်ပဲ အသေခံ ချနေကြတာဖြစ်ပြီး Brain Wash လုပ်ခံထားရတာကြောင့် သနားဖို့လည်းကောင်းပါတယ်။
ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပြီး၊ အက်ရှင်ကောင်းကောင်း၊ Effect ကောင်းကောင်းနဲ့ ရိုက်ကူးထားသလို၊ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်လည်းကောင်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Character Development လို့ ခေါ်တဲ့ ဇာတ်ကောင် တွေကို ပရိတ်သတ် နဲ့ အချိတ်အဆက်မိအောင် လည်း ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးထားလို့ ဇာတ်ကားထဲမှာ ပါတဲ့သူတွေကို ပရိတ်သတ်အနေနဲ့ Relate လုပ်လို့ရပါတယ်။ IMDB Ratingမှာလဲ 8.5 အထိ ရထားတာဆိုတာ ဇာတ်ကားကောင်းဆိုတာ သံသယ ၀င်စရာ မရှိပါဘူး။
အောက်ပါလင့်တွင် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 2:26 AM 1 comment: Links to this post
English Premier League Season 2014/2015 Best Goals
Posted by okkala net at 9:23 PM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 9:22 PM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 7:21 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 7:16 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 7:08 AM No comments: Links to this post
ကာတွန်း ၀ိဇ္ဖာ ရဲ့ လေလွင့်နတ်သားရဲ့ ရင်ခုန်စီချင်း (38.4 MB )
အခြားတစ်ဖက် ( စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် + ၀တ်မှုန်ရွှေရည် ) မြန်မာဗီဒီယို သရဲကား
ငယ်စဉ်ကအတူကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ချစ်သူနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရခဲ့သော်လည်း ဖခင်အမတ်ကြီး အသတ်ခံရမှာစိုးတဲ့အတွက် မိဖုရားဖြစ်လာခဲ့သူ ဟွယွန်
ဟွယွန်ကို ငယ်စဉ်ကတည်းက စိတ်ဝင်စားသော်လည်း လက်လွတ်ခဲ့ရပြီး ဘုရင်ဖြစ်လာမှ မရမကယူချင်နေတဲ့ ဆောင်ဝမ်
အမတ်ကြီးသမီးနဲ့ချစ်မိလို့ ယောက်ကျားစစ်စစ်ဘ၀ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီး လက်စားချေဖို့အတွက် နန်းတွင်းထဲကို ကုန်းကုန်းအဖြစ် ၀င်ရောက်လာသူ ကွမ်ယို
အာဏာမက်မောလွန်းတဲ့အတွက် လက်ရှိဘုရင်ကိုသတ်ပြီး သားဖြစ်သူ ဆောင်ဝမ်ကို ရုပ်သေးဘုရင်အဖြစ် အသုံချပြီး နန်းတော်ကိုချယ်ခြယ်နေတဲ့ မယ်တော်ကြီး
အဲဒီ ဇာတ်ကောင်တွေဦးဆောင်တဲ့ဒီဇာတ်ကားဟာ အာဏာ၊ တဏှာ၊ အချစ်၊ မိခင်မေတ္တာနဲ့ လက်စားချေမှုတို့ကို ပြသထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ အာဏာဟာ လူတွေကို ဘယ်လောက်စေစားနိုင်လဲ၊ လူတွေကို ဘယ်လိုရူးသွပ်သွားစေနိုင်လဲဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် မိန်းမတွေရဲ့စိတ်ဓါတ်ဟာ ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ မင်းသမီး Jo Yeo-jeong ကတော့ တီဗွီက ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာ မြင်ဖူးကြမှပါ။ ဒီကားမတိုင်ခင်က Servant(2010) မှာကတည်းက လူတွေစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ Jo Yeo-jeong ဟာ ဒီ The Concubine(2012) ထွက်အပြီးမှာတော့ တော်တော်ကိုနာမည်ကြီးသွားပါတယ်။ ဒီကားက ဇာတ်လမ်းအသားပေး Drama ကားဆိုပေမယ့် တစ်ချို့အခန်းတွေက တော်တော်ကြမ်းတာကြောင့် 18+++ ဖြစ်ပါတယ်။ IMDb မှာလည်း Rating ကောင်းတဲ့ကောင်းပါ။ Jo Yeo-jeong ဘာလို့နာမည်ကြီးသွားလဲကြည့်လိုက်ပါဦး
Small File Size Download Link>>>>https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZC1pVZWcBoUyyYr9bCoQLMVB7bu4nOLupk
Posted by okkala net at 12:58 AM2comments: Links to this post
USA vs Colombia 2-0 All Goals - Estados Unidos vs Colombia 2-0 Women's ...
Posted by okkala net at 7:50 PM No comments: Links to this post
ရိုမီယို ရဲ့ မနက်ဖြန် ( နေတိုး + ၀တ်မှုန်ရွှေရည် + ဟာသ သရုပ်ဆောင်များစွာ )
Posted by okkala net at 2:49 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 10:53 PM No comments: Links to this post
ဘောလုံး လောကသမိုင်းမှာ အကောင်းဆုံ အဝေးကန် ဂိုးသွင်းမှု ( 50 ) ဂိုး
Posted by okkala net at 12:45 AM No comments: Links to this post
Black Hand 2015 UNCUT ( ဆရာဝန်မလေး ၏ အချစ်ဇာတ်လမ်း ) Koreal Love Movie
Posted by okkala net at 10:42 PM No comments: Links to this post
ဘောလုံးသမိုင်းတလျှောက် အကောင်းဆုံး ပင်နယ်သီ ကာကွယ်မှု (၁၀)ခု
ဖေ့ဘွတ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ မြင်းခြံ 18+ HD Movie ဖိုင်ပါ
ကြည့်ချင်သူများ အောက်ပါလင့်တွင် ဒေါင်းလုပ်နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 9:02 PM 1 comment: Links to this post
နတ်ဆရာ ခေါက်တဲ့ပေသီး ( စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် + အိချောပို ) မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားသစ်
Posted by okkala net at 8:56 PM No comments: Links to this post
U20 World Cup ဖိုင်နယ် မှာ ဆာဘီးယားကို ဒူးထောက်အရှုံးပေးခဲ့ရတဲ့ ဘရာဇီး ( Brazil 1 -2Serbia )
Posted by okkala net at 7:44 PM No comments: Links to this post
ကျွန်မကနှင်းဆီပါမောင် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီး (အစအဆုံး)
Posted by okkala net at 8:44 PM No comments: Links to this post
ဇွန်လ (၁၂) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Sule Shangri-La Hotel မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ နန်းသီရိမောင် ရဲ့ "အချစ်ကဘာလဲ" တစ်ကိုယ်တော် တေးစီးရီး စာနယ်ဇင်း မိတ်ဆက်ပွဲ
Posted by okkala net at 1:58 AM No comments: Links to this post
ကိုပါအမေရိက ဖလားပြိုင်ပွဲ အုပ်စုအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ ဗင်နီဇွဲလားအသင်း အနိုင်ရရင် သူမရဲ့
၀တ်လစ်စားလစ် အလှကို လှစ်ဟပြမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့တဲ့ ဗင်နီဇွဲလား ရုပ်သံအစီအစဉ်
တင်ဆက်သူတစ်ဦးဟာ ကိုလံဘီယာကို ဗင်နီဇွဲလားအသင်း အနိုင်ရတဲ့ပွဲစဉ်အပြီး
ကိုလံဘီယာလို နာမည်ကြီး ကစားသမား အများအပြား ပါဝင်တဲ့အသင်းကို ဗင်နီဇွဲလား
အနိုင်ရခဲ့တာ ”အမျိုးသမီးတွေ ပေးတဲ့ခွန်အား”ကြောင့်လို့ ဆိုသူက ဆိုကြပါရဲ့။
မင်းသမီး Maggie Q အဓိကပါဝင်ထားပြီး မင်းသားချော Daniel Wu နဲ့အခြားသရုပ်ဆောင်များစွာအားဖြည့်ထားပါတယ်။
Action, Drama, Romance အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး IMDb Rating(5.7/10) ရရှိထားပါတယ်။
World Cup U-20 Brazil vs Senegal 5-0 | All Goals & Highlights
2015 seagame Top 10 goal တွင် မြန်မာ နှင့် ဖိလစ်ပိုင်ပွဲမှ ကျော်ဇင်လွင်၏ သွင်းဂိုး ပါဝင်
Posted by okkala net at 4:17 AM No comments: Links to this post
Facebook လူမှုကွန်ယက် အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အလှကြောင့် ကျော်ကြားလာတဲ့ မျက်နှစ်သစ် စာရေးဆရာမလေး ရွှေရေးထင်ထင် နဲ့ ခဏတာ
မေလ (၃၀) ရက်နေ့က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ New York မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် နှင့် သူငယ်ချင်းများရဲ့ "New Yrok7Stars ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ Night" ဟစ်ဟော့ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ
ဥက္ကဌမ၏သမက်တော် ( နေတိုး + နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း + စိုးမြတ်သူဇာ ) မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားသစ်
Posted by okkala net at 11:42 PM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 11:18 PM 1 comment: Links to this post
ကျွန်တော့်နာမည် အောင်သော် ပါ။ အသက်က ၁၇နှစ် သူငယ်ချင်းတွေက လူပျိုရည်မပျက်သေးတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဂိုဏ်းဝင်သွားအောင် မင်္ဂလာဈေး JJ အောက်မှာ … ညမွှေးပန်းသွားရှာမယ် လိုက်ခဲ့ ..ဆိုတာနဲ့ လူငယ်ဆိုတော့ စူးစမ်းချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ လိုက်သွားခဲ့တယ်.. ဟိုရောက်တော့ .. သားကြီး မင်းက ဒီည အထူးဆိုတော့ ..မင်းတစ်ယောက်ရွေးကွာတဲ့ သူတို့က သူတို့ စိတ်ကြိုက်တစ်ယောက်ရွေးတယ်.. အဲဒီမှာ ၀ိုင်းဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို ကျွန်တော်စတွေ့ခဲ့တယ်… ရှေ့မှာလာရပ်ပြနေတဲ့ ကောင်မလေးတွေထက် .. ဟိုးးး သစ်ပင်အောက်မှာတစ်ယောက်တည်း ငူငူငေါင်ငေါင် ထိုင်နေတဲ့ သူမဆီ ..ကျွန်တော် အသာလျှောက်သွားတယ်.. မီးမလင်းတလင်းမှာ ..မပီဝိုးတ၀ါး ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက် ကျွန်တော့်အထင် မျက်ရည်တွေများ ၀ိုင်းနေသလား မသိပါဘူး.. မင်းနာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ ..၀ိုင်းတဲ့ .. နာမည်မေးတုန်းရှိသေးတယ်….ခေါင်းဆိုတဲ့ လူ ရောက်လာပြီး ညီက ဒီကလေးမလေးကြိုက်လို့လားတဲ့ … ကျွန်တော့်ခေါင်းကို အသာညိတ်မိလိုက်တယ် ထင်ပါတယ်.. ကဲ ..မိဝိုင်း ထတော့ … အလုပ်ပေါ်ပြီ …နင်စိတ်ညစ်တာနောက်မှညစ်.. လိုက်သွား .. ခေါင်းရဲ့ စကားအဆုံးမှာ .. ညမိမယ် နတ်သမီးလေးတစ်ပါး ဘာဆိုဘာမှ ပြန်မပြောပဲ အရုပ်တစ်ရုပ်လို ထလိုက်လာပါတယ်.. ဒီလိုနဲ့ …၀ိုင်းရယ် ..နောက်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရယ် .. ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း သုံးယောက်ရယ် ..ကားတစ်စီးနဲ့ သူတို့ ညွှန်ပြတဲ့ သူတို့ကျက်စားရာ .. တည်းခိုခန်းတစ်ခုဆီ ထွက်လာခဲ့ကြတယ်.. ကားပေါ်မှာ ..ရှေ့ခန်းမှာ ထိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို လက်ညိုးထိုးပြီး ..သူငယ်ချင်းကပြောတယ် ၀ိုင်း… နင့်ကို ဒီကောင်က ဘိုင်နိမ်းနဲ့ ခေါ်လာတာလေ….အဲလို ပြောတော့.. နတ်သမီးလေး ဆီက အသံထွက်လာတယ်.. အကိုက ၀ိုင်းကို သိလို့လားတဲ့ …. ကျွန်တော် အသာအယာပဲ ခေါင်းခါပြလိုက်ပါတယ် ကျွန်တော်မှ မသိတာ … သူ့ကိုဘာကြောင့် ရွေးခဲ့မိတယ်ဆိုတာလဲ မသိဘူး.. ကျွန်တော့်စိတ်က ခံစားချက်ရှိတဲ့ သူတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ် ထင်ပါရဲ့ .. ဟိုတယ်ရောက်တော့ … ကျွန်တော့်ကို သူငယ်ချင်းတွေက ၀ိုင်းနဲ့ အတူနေဖို့ အခန်းတစ်ခန်းပေးတယ်….. တစ်နာရီပဲ ရမယ်နော်သားကြီး .. ငါတို့ အားလုံး အလှည့်ကျပဲ ….
Posted by okkala net at 1:00 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 12:38 AM No comments: Links to this post
ကျွန်တော့်မယားအများပိုင် ( ဇေရဲထက်၊ သွန်းဆက် ) မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားသစ်
Posted by okkala net at 12:34 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 4:25 AM No comments: Links to this post
Amazing Goals - (Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Lionel Messi, Neymar, ...
Posted by okkala net at 4:24 AM No comments: Links to this post
(1)18+ apk (Boy Only) https://drive.google.com/…/0B1AAmWyli2P4Z1dBYy1uWVZsY…/view… ---------- (2)ဖုန်းအဝင် Call တွေကိုကိုယ်တစ်ယောက်တည်းကိုင်နိုင်အောင် Password ခံထားပေးမဲ့apk https://my.pcloud.com/publink/show?code=dtW7 ဒါလေးကတော့ အထွက် Call အတွက်ပါ http://pc.cd/2VKitalK ---------- (3)မြေပုံကိုကြည့်ဖို့ပါ(ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုတောင်မြင်ရပါတယ်) http://pc.cd/5LKitalK ---------- (4)Color Note (ဖုန်းထဲမှာမှတ်ချင်ရာမှတ်ဖို့) http://pc.cd/2RKitalK ---------- (5)မိမိသုံးနေတဲ့ Internet Speed ကိုဖော်ပြပေးမဲ့ apk http://pc.cd/yRKitalK ---------- (6)Adobe Reader ပါ။ဖုန်းထဲက စာအုပ်ဖိုင်လေးတွေဖတ်ဖို့ပါ http://pc.cd/JRKitalK ---------- (7)ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကို Video ရိုက်ပေးမဲ့ SCR Pro apk (Need Root) http://pc.cd/eyi ဒါကနောက်တစ်မျိုး http://pc.cd/PSPitalK ---------- (8)Picsay Pro (ဓါတ်ပုံပြင် ဓါတ်ပုံပေါ်စာရေးဖို့အကောင်းဆုံး apk လေးပါ) http://pc.cd/g0KitalK ---------- (9)App Lock (ဖုန်းထဲက apk တွေကို တခြားသူမကြည့်နိုင်အောင် Password ခံထားပေးမဲ့ apk) http://pc.cd/epKitalK ဒါလေးကတော့ Video တွေကို Lock ခတ်ဖို့ပါ http://pc.cd/yXKitalK ---------- (10)Mp4 Video လေးတွေကို Mp3 အဖြစ်ပြောင်းပေးမဲ့ apk http://pc.cd/N5KitalK ---------- (11)မိမိမျက်နှာကို တိရိစ္ဆာန်မျက်နှာဖြင့် အလှဆင်လိုသူများ http://pc.cd/4BlitalK ဒါလေးကတော့ Tattoo နဲ့အလှဆင်ဖို့ http://pc.cd/uQlitalK ---------- (12)Screen Lock အလန်းလေးပါ https://my.pcloud.com/publink/show… ဒါလေးကတော့ လုပ်နည်းစာအုပ်လေးပါ https://my.pcloud.com/publink/show… ---------- (13)Mp3 သီချင်းမှာပုံလေးတွေထည့်ချင်သူများအတွက် I Tag (မြန်မာမူ) apk http://pc.cd/vJlitalK ဒါလေးက English Version http://pc.cd/PXlitalK ----------- (14)ဖုန်းScreen Shot ရိုက်ဖို့ http://pc.cd/d4KitalK ---------- (15)EUI Font Installer (No Need Root) http://pc.cd/O9xitalK ---------- (16)ဖုန်းပြောရင်းသီချင်းဖွင့်ပြလို့ရမယ့်apk http://pc.cd/P2xitalK ---------- (17)ငါးရိုးပုံလိုင်းတံနဲ့လန်းမယ် apk https://my.pcloud.com/publink/show?code=BYPitalK ---------- (18)Settings နောက်ခံပုံထည့်ဖို့apk http://pc.cd/nsK ---------- (19)Music apk လုပ်နည်း ဒါလေးကလုပ်နည်းစာအုပ်ပါ http://pc.cd/7YlitalK ထည့်ရမယ့် Text ဖိုင်တွေပါ http://pc.cd/pmlitalK (ဒါလေးလုပ်ဖို့ AIDE ဆိုတဲ့ apk လေးလိုပါတယ်) ---------- (20)Black4FB (Only Me မလုပ်ထားတဲ့ Facebook က Mail တွေဖုန်းနံပါတ်တွေကိုကြည့်ဖို့) http://pc.cd/TplitalK ---------- (21)Font အလှ apk များးးးးးး http://pc.cd/d4litalK နောက်တစ်ခု http://pc.cd/trY7 နောက်တစ်ခု http://pc.cd/NgPitalK ဒါက I Font apk http://pc.cd/AoY7 ---------- (22)ကိုယ့် Facebook ကိုသူများမသုံးနိုင်/မကြည့်နိုင်အောင် Lock လေးခတ်ထားချင်သူများအတွက် http://pc.cd/w4litalK ---------- (23)Facebook Auto Like apk https://db.tt/Cb42u047 ---------- (24)Uni ရော Zawgyi ရောရိုက်လို့ရတဲ့ Frozenkeyboard2http://pc.cd/nIKitalK ---------- (25) Touch Pal Keyboard (Myanmar လိုပါစာရိုက်နိုင်ပါတယ်) http://www4.zippyshare.com/v/VYIQW9AR/file.html ဒါကနောက်တစ်မျိုး http://pc.cd/tYD7 ---------- (26)အစုံသုံး DX Toolbox ဖုန်းမအားသေးပါ လို့လည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။ http://www.mediafire.com/?ns7pj6eb23bkvde ---------- (27)Busybox Pro http://pc.cd/P3c ---------- (28)Bagan Keyboard (5.10) http://pc.cd/spz7 ---------- (29)Game ဆော့နေရင်းနဲ့တခြားapk လေးတွေဖွင့်သုံးဖို့ http://pc.cd/lvD ---------- (30)သီချင်း apk ပြုလုပ်နည်း http://mastermyo11android.blogspot.in/2015/06/apk.html?m=1 ---------- (31)Messager အကြည်ရောင် https://db.tt/s5NtWFaA ---------- (32)Facebook မြန်မာမူ apk https://www.dropbox.com/…/facebook%20မြန်%E2%80%8Bမာ(ကို%E2… ---------- (33)Blackmark သိတယ်နော် မှောင်ခို Market apk လေးပါ။ http://earth.androidapksfree.com/…/com.black_mart-0.99.2.70… ---------- (34)လက်ခုပ်တီးတာနဲ့ Flash မီးလင်းအောင်လုပ်ပေးမဲ့ apk https://kozawthwin.ocloud.de/ind…/s/ixCWQk1gKXtWYY4/download ---------- (35)အကောင်းဆုံး Backup apk လေး http://pc.cd/eylitalK
Credit to LuMone......
Posted by okkala net at 5:21 AM No comments: Links to this post
Better Living Through Chemistry (မြန်မာစာတန်းထိုး) ၁၈+
March 14, 2014 မှာ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး Directors: Geoff Moore, David
Posamentier တို့ နှစ်ဦးက ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားတာပါ
အိမ်ထောင်ရေး နှင့် အချစ် ပညာပေး ဇတ်လမ်းဖြစ်ပြီး
အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှု နှင့် အိမ်ထောင်ရေးမသာယာမှုတွေအတွက်
ကြိုတင်ဆင်ခြင်နိုင်ပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညှိယူမှသာ အိမ်ထောင်ရေးသာယာ
နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို ဇတ်လမ်းဖွဲ့ ပုံဖော်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်...
ဇတ်လမ်း အစမှာတော့ ဆေးဝါးပညာရှင် ဒေါက် ဟာ သူ့ရဲ့မိန်းမနှင့်
တစ်အိပ်ရာထဲ အိပ်ရသော်လဲ မိန်းမက သူမ အောင်မြင်ရေးအလုပ်ကိစ္စ
များကိုသာ ဦးစားပေးပြီး အိမ်မှုကိစ္စနှင့် လင်ယောင်္ကျားကို ဂရုမစိုက်တက်
မကြင်နာတက်သော မိန်းမဖြစ်နေသောကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးမှာ
ဒီကြားထဲ တစ်ဦးထဲသော သားဖြစ်သူကလဲ အဖေစကားကိုနားမထောင်
လုပ်ချင်ရာလုပ်နေပြီး ဆိုဆုံးမသော အခါတွင်လဲ အမေဖြစ်သူက
အလုပ်မှာလဲ ယောက်ခမဖြစ်သူ ရဲ့ စီးပွားရေးကို ၀င်ဦးစီးပေးနေရပြီး
ပိုက်ဆံရှိသော ယောက်ခမ က အနိုင်ကျင့် ခေါင်းပုံဖြတ်သမျှ သည်းခံနေရ
Customer များရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေရ နှင့် ဘ၀ ရဲ့
ပျော်ရွှင်မှု ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိကို ဖြစ်လာခဲ့ရပါတော့တယ်....
ဒီလိုနဲ့ ဒေါက် ရဲ့ ဘ၀ ကို အောင်မြင်မှုတွေ နဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ
ဆောင်ကျဉ်းပေးမယ့် အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်
ထို အမျိုးသမီးကတော့ အယ်လိဇဘတ် ဖြစ်ပြီး ၀န်ကြီးတစ်ဦးရဲ့
မိန်းမ ဖြစ်ခါ ဆေးဆွဲနေသူ တစ်ဦးလဲ ဖြစ်နေပါတယ်...
အယ်လိဇဘတ် မှာလဲ ယောင်္ကျားဖြစ်သူ ၀န်ကြီး ရဲ့ ပိုက်ဆံသာပေးပြီး
မကြင်နာနိုင်မှုတွေ အတွက် ဆေးဆွဲနေခဲ့ပြီး ဆေးဝါးပညာရှင်
ဒေါက် နဲ့ ရင်းနှီးမှု ယူကာ မူးယစ်ဆေးဝါး များ ဖော်စပ်ကာ
အတူတူသုံးဆွဲရင်း အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြားတဲ့ အခြေအနေသို့
Posted by okkala net at 5:16 AM No comments: Links to this post
ဓာတ်ပုံကို အလန်းစာအမိုက်စားEffect တွေနဲ့ ရိုက်/ပြုလုပ်နိုင်တဲ့-Camera FV-5 v2.70Apk
Posted by okkala net at 1:29 AM No comments: Links to this post
ကြိုက်လွန်းလို့ မနည်းလိုက်ရှာပြီးတင်ထားတဲ့ ကားပါ Sex ကိစ္စကို အလွန်အစွန်းရောက်သွားတဲ့ လူငယ်လေးတယောက်အကြောင်းပါ ဗဟုသုတ အနေနဲ့ ကြည့်လို့ရပါတယ် မိသားစုနဲ့တော့ ကြည့်လို့မသင့်တော်ပါဘူး 18+
ရွာလေးက ဧရာဝတီမြစ်အနောက်ဘက် ပြည်မြို့ ၏ တစ်ဘက်ကမ်းတွင် ရှိ၏ ။
ထုံးဘို နှင့် ဆင်တဲတို့ ၏ အနောက်ဘက် ခပ်ကျကျမှာ ဖြစ်သည် ။
ယခုတော့ ပုသိမ်-မုံရွာ ကားလမ်း အရှေ့ ဘက်နှင့် နီးကပ်သွားသည် ။ ရွာကလေးတွင် ယာစိုက် တောတိုး
အလုပ်များသာ လုပ်ကြလေသည် ။ မြေပဲ..ငြုတ်..နှင့် ရာသီပေါ်သီးနှံများ စိုက်ပျိုးကြသည် ။
ရွာဘေးက ချောင်းကလေး ကလည်း ယာခင်းစိုက်ခင်းများအတွက် နွေနွေ မိုးမိုး ရေရရှိရာ စိုက်ပျိုးသူတွေ
အတွက်အဆင်ပြေသလို ရွာကလေး၏ ရှုခင်းကိုလည်း ပြည့်စုံလှပစေ၏ ။ တစ်ရွာလုံး သစ်ပင်များနှင့်
အုံ့ အုံ့ ဆိုင်းဆိုင်းရှိသဖြင့် နေ့ လည်နေ့ ခင်း အေးအေးချမ်းချမ်း ရှိသလို ညနေစောင်းလျှင်လည်း ရွာစွန်က
ထန်းတောလေးက ကာလသားတွေ အတွက် အပန်းဖြေဥယျာဉ်လေး ဖြစ်နေပြန်၏ ။
တောသူတောင်သားတွေမို့ဒီလိုညနေခင်းများသာ သူတို့ အတွက် အမောပြေ..အပမ်းပြေစေ ပါသည် ။
သူတို့ ခမျာ မိုးရိပ်လေးတွေ့ သည်နှင့် စိုက်ပျိုး ထွန်ယက်ဘို့ လုပ်ရသလို ဆောင်းနှင့် နွေ ရောက်တော့လည်းရခိုင်ရိုးမအခြေအထိ ထင်းခုတ်.တောတိုးနှင့်နားရသည်က မရှိတတ်ချေ..။
Posted by okkala net at 12:28 AM 1 comment: Links to this post
Sea Games 28 _ Opening Ceremony National Stadium 28th SEA Games Singapore 2015 ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
၁၈၈၅ ခုနှစ် တွင် မြန်မာ ဘုရင်သီပေါမင်းနဲ့မိဘုရား ကို နန်းချပြီး နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ တခုလုံး
ကို သိမ်းပိုက် ခဲ့ကြ သည်..။ မန္တလေး နန်းတော်ကြီး ကို နယ်ချဲ့များ ၀င်ရောက် ကာ ဘုရင်နဲ့ မိဘုရား ကို
ဖမ်းဆီးပြီး သူတို့ ရဲ့ ကိုလိုနီ အဖြစ် သိမ်း ပိုက်ပြီး သား ဖြစ်သည့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ရတနာဂီရီ ကို ခေါ်ဆောင်
သွားခဲ့ ပေ သည် ...။အမြှောက်တချက်မဖေါက်ဘဲ အရှင်နှစ်ပါး ကို ကြက်ကလေး ..ငှက်ကလေးလို
ဖမ်းသွားကြတာ ရင်နာစရာဘဲလို့ ငထော ရဲ့ အဖိုးက စိတ်နာကျည်းစွာနဲ့ ပြောနေသည် ။ နန်းမြို့ရိုး
လေးဘက်လေးတန် မှာ မျက်နှာဖြူ နယ်ချဲ့ တပ်တွေ နေရာယူထားကြသည် ကို မြို့သူမြို့သားတွေ က
အထူးအဆန်း သဖွယ် ကြည့်ရှု နေကြ သည် ..။ မြစ်ဆိပ်မှာ မီးသင်္ဘောတွေ နဲ့ တဖွဲဖွဲ ရောက်ရှိလာတဲ့ မျက်နှာဖြူ အင်္ဂလိပ်စစ်သားများ သည် မြစ်ဆိပ် မှ နန်းတော်ကြီး ဆီကို ချီတက်နေကြ သည် .. ။ အင်္ဂလိပ် စစ်တပ်ဆိုသော်ငြားလည်း တပ်တတပ်တွင် ဗိုလ် လုပ်သူသာ အင်္ဂလိပ် ကုလားဖြူ ဖြစ်ပြီး ကျန် သော စစ်သားတွေမှာ ကုလားမဲများ ဖြစ်ကြ သည် ..။ ငထောသည်ထိုစဉ်အခါကအသက်၁၂နှစ်ခန့်သာရှိသည်။
ဂေါဝိန်ဆိပ်ကနေ..ကမ်းပေါ်တက်လာသော..နယ်ချဲ့တပ်တွေကိုလမ်းဘေးတဖက်တချက်မှ လူတွေ
၀ိုင်းကြည့်နေသည့် အထဲ ငထော လဲ ပါ သည် ..။
Posted by okkala net at 1:50 AM No comments: Links to this post
Title: If you die
AKA: If you die
Director: Kim Moon-ok
Posted by okkala net at 10:23 PM No comments: Links to this post